Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Uruguayan Luis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
Ndụ anyị Luis Suarez Biography na-ewetara gị ozi gbasara Akụkọ nwata, ndụ ya, ndị nne na nna, Eziokwu ezinụlọ, nwunye, ụmụaka, ndụ onwe onye na ndụ ya. Na mbu, nyocha ya zuru oke banyere akụkọ ndụ ya site na mgbe ọ bụ nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Eeh, eleghị anya ị hụrụ ya ka ọ na-atarịta onye ọkpụkpọ n'otu asọmpi iko mba ụwa. N'ịhapụ adịghị ike ya, onye Uruguayan bụ n'ezie ezigbo onye isi n'etiti bọọlụ na-aga n'ihu. Ka anyị na-etinye akụkọ ndụ ya, anyị ghọtara na ọ bụ mmadụ ole na ole gụrụ akwụkwọ akụkọ Luis Suarez nke dị ezigbo mma. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ banyere nwata nke Luis Suarez:
Maka ndị na - ebido Biography, aha ya bụ 'El Pistolero'nke pụtara' Gunfighter. ' A mụrụ Luis Alberto Suárez Díaz na 24th nke Jenụwarị 1987 nne ya, Sandra Suárez (onye na-elekọta ụlọ) na nna, Rodolfo Suárez (onye bụbu onye agha na onye ọgba bọọlụ mbụ) na Salto, Uruguay.
Ihe ị ga-ekwupụta, onye egwuregwu bọọlụ mba Uruguay bụ nwa nke anọ n'ime ụmụaka asaa amụrụ site na njikọ na-eme nke ọma n'etiti nne na nna ya.
Luis Suarez ezinụlọ Mụrụ:
Banyere agbụrụ ezinụlọ ya na agbụrụ ya, Suarez bụ nwa amaala Uruguayan nke agbụrụ agbụrụ (Afrịka, Spanish na Ugwuuawa. Records gosikwara na o nwere nna nna ojii.
Onye na-ahụ maka bọl ahụ toro na Cerro dị na Salto n'akụkụ ụmụnne ya asaa na-abụghị nwanne nwanyị na-alụbeghị di. Little Suarez nwere ahụmịhe nke ịda ogbenye mana agbanyeghị, o biri ndụ obi ụtọ dịka ezinụlọ nke obere ya biri kpamkpam na obodo ya.
Dị ka ọtụtụ ụmụaka ọgbọ ya n'oge ahụ, Suarez nwere mmasị n'egwuregwu football nke ya na ndị ọgbọ ya na-egwuri egwu iji jiri obi ụtọ na-agafe oge na mpaghara obodo ya, Sportivo Artiga.
Luis Suarez (Middle Ọrụ) na Sportivo Artiga. Ebe E Si Nweta: FPCP.
N'oge na-adịghị anya, ezinụlọ Suarez kwagara n'isi obodo 'Uruguay' Montevideo mgbe nna ya nwesịrị ọrụ na ụlọ ọrụ bisiki El Trigal na Montevideo. Nwa nke 7 ahụ adịghị amasị iso ezinụlọ ahụ n'ihi nke a, ọ nọrọ na Salto na nne nne ya hụrụ n'anya, bụ Da Rosa maka ihe dị ka otu ọnwa.
Luis Suarez na enyi ya na mama nne ya. Ebe E Si Nweta: Anyanwụ.
Suarez mechara nwee ihe ọ bụla ọ ga - eme ma sonyere ndị ezinụlọ ya mgbe nne ya nwetara ọrụ nhicha na ọdụ ụgbọ ala Central nke Montevideo a na-akpọ Tres Cruces.
Luis Suarez Mmụta:
Suarez na ezinụlọ ya biri na La Commercial agbata na Montevideo ma edebara aha ya na School No171 na Tres Cruces nke bụ obodo Montevideo.
Luis Suarez na School No171 na Tres Cruces. Ebe E Si Nweta: Daily Mail.
Ọ bụ na Montevideo na obi ụtọ na-aga kechioma nwatakịrị rịọrọ ka a deba ya n'akwụkwọ na Urreta FC na La Blanqueada, arịrịọ 8 rịọrọ ya n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụlọ akwụkwọ ya na Tres Cruces nwere ọrụ egwuregwu ya. Ihe mmepe ahụ gosiri na ọ bụghị nanị na Suarez na-eto eto nwere obi ike na ọ bụ nkà egwuregwu nke football, kama ọ dị njikere ịkwalite ya na ọnọdụ asọmpi. Otú ọ dị, ọ na-esiri ya ike ime mgbanwe maka ụzọ ndụ n'ime obodo.
“..Anyị bịara n'otu obodo ebe ọ na-agaghị ekwe omume igwu ụkwụ ọtọ na ahịhịa, ha na-ekwukwa okwu dị iche iche ebe ahụ ma n'ezie na-achị m ọchị. Ma aghaghị m iji ihe ahụ niile mee ihe dị ka m nwere ike ime. ” Suarez na-ekpughe n'akwụkwọ Vamos Que Vamos.
Mgbe Suarez gbalịsiri ike imeghari, nne na nna ya kewara ya nke ukwuu mgbe ọ dị naanị 9 afọ. Ọganihu ga-4 afọ mgbe e mesịrị (mgbe ọ bụ agadi 15) hụ ya ka ọ were ọrụ ọjọọ nke ikpochapụ n'okporo ámá nke Uruguay iji nyere aka bulie ego maka ezinụlọ ya nke na-enweghịzi nna.
Akụkọ banyere nwata nke Luis Suarez- Ndụ Ahụike mbụ:
N'agbanyeghị nke ahụ, Suarez nọgidere na-egwuri egwu maka Urreta FC na obere oge mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dọtara uche nke onye na-agụ akwụkwọ, Wilson Pírez onye nyere ya ohere iwulite ọrụ ọkachamara na football na Nacional team team.
Luis Suarez na Nacional. Ebe E Si Nweta: Liverpool Echo.
Otú ọ dị, Suarez toro ghọọ onye ntorobịa na-enweghị uche, malitere ị drinkingụ mmanya na ịhapụ ndị ọjọọ. Nke ukwuu bụ ihe ndọpụ uche ya na ọ kwụsịrị ịkwalite site na otu nke asaa nke Nacional ma chee ihu na enwere ike ịhapụ ya.
“… Site na 12-14, agara m na mpaghara nke bọọlụ anaghị agara m nke ọma na achọghị m ịmụ ihe. Enweghị m mmasị ịzụ. Ọ na-amasị m igwu egwuregwu na n'ụzọ ahụ ọ ga-esiri m ike ịme ihe. Ezigbo iwe were m. Abụ m onye nnupụisi na nke ahụ rụgidere m ọrụ. ” Edetu Suarez n'akwụkwọ Vamos Que Vamos.
Suarezzọ Luis Suarez Ka Fbụ Akụkọ Akụkọ Ndụ:
Wilson Pírez (onye bu ụzọ weta Suarez na ndị ntorobịa Nacional) bịara napụta Suarez site n'inye ya ohere ọzọ iji mee omume ya ma gosipụta onwe ya na klọb ahụ. Nwa okorobịa Suarez weere ohere ahụ wee mee ihe kwekọrọ na ya mgbe ọ matara na ọ nwere ike inyere ezinụlọ ya aka n'ọdịnihu yana ịnweta bọọlụ mara mma ma ọ bụrụ na ọ rapara na bọọlụ.
“Echere m banyere ezinụlọ m, ụmụnne m, ma kpebisie ike na m ga-enwe ike inyere ha aka ma ọ bụrụ na m gafee egwuregwu bọọlụ to Aghaghị m ịga n'ihu akpụkpọ ụkwụ na echiche; 'Ọ bụrụ na ịchọrọ akpụkpọ ụkwụ ndị ahụ, ị ​​ga-azụ' '” Edetu Suarez n'akwụkwọ Vamos Que Vamos.
Luis Suarez's Biography- Bilie Iji Mara Aha Akụkọ:
Ya mere, Suarez bilitere site na Nacional na 2005, nyeere ya aka merie njikọ 2005-06 Uruguayan na ihe mgbaru ọsọ 10 na egwuregwu 27. Omume ọma ya mechara mee ka ọ gaa Groningen, Ajax, Liverpool na n'ikpeazụ Barcelona ebe e debanyere aha ya maka £ 64.98 (€ 82.3) iji ghọọ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị ọnụ n'oge ahụ.
Luis Suarez bịanyere aka na Barcelona na 2014. Ebe E Si Nweta: ESPN.
Ndụ mmekọrịta Luis Suarez- Nwunye na ụmụaka:
Luis Suarez bụ nwoke lụrụ nwanyị. Anyị na-ewetara gị nkọwa zuru oke gbasara akụkọ nwoke na nwanyị na nwoke na nwanyị, gụnyere otu o si zute ma lụọ nwunye ya bụ Sofia Balbi. Maka ndị na-ebido ya, ọ nweghị ndekọ banyere mmekọrịta gara aga nke Suarez ka a maara ya naanị na ya na onye ya na ya nọ ugbu a ọtụtụ iri afọ.
Suarez zutere Sofia Balbi mgbe ọ bụ nwata nwoke 15 na-enye nsogbu na-achọ ịkwado onwe ya na otu ndị ntorobịa Nacional. Ọ bụ Sofia nyere Suarez nkwado, agbamume ma mee ka ọ lekwasị anya n'oge ahụ.
Luis Suarez enwewo mmekọrịta na Sofia Balbi kemgbe 2002. Ebe E Si Nweta: Ovación.
Ọ bụ ezie na lovebirds kewara maka oge mgbe nna Sofia kwagara na ezinụlọ ya dum na Spain, ha dịghachiri ọzọ mgbe Suarez kwenyesiri ike nne na nna Sofia ka ya sonyere ya na Netherlands mgbe ya na FC Groningen (n'etiti 2006-2007). Duo weere mmekọrịta ha n'ọkwa kachasị elu site na ịlụ afọ abụọ mgbe e mesịrị na 2009.
Suarez na Sofia lụrụ na March 2009. Ebe E Si Nweta: Twitter.
Alụmdi na nwunye ha nwere ụmụ atọ mara mma, nwa nwanyị Delfina (amụrụ August 5th 2010), Benjamin mụrụ (amụrụ na Septemba 26, 2013) yana Lauti (amụrụ October 24th 2010).
Luis Suarez na ezinụlọ. Ebe E Si Nweta: Instagram.
Ndụmọdụ ezinụlọ Luis Suarez:
A mụrụ Suarez n'ezinụlọ buru ibu nke 9. Anyị na-ewetara gị eziokwu banyere ndị òtù ezinụlọ ya.
Banyere nne Suarez: Mama Luis Suarez abụghị onye ọzọ ma Sandra Diaz. Sandra dị ka ọtụtụ ndị nne, nọ nso nwa ya nwoke ma nwee ncheta doro anya banyere oge ọ bụ nwata n'agbanyeghị ịzụ ụmụ 6 ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ịhụ Suarez na nne ya na foto, ọ bụ ezie na ọ bụ onye na-akwado ya nke ukwuu ma gbachitere ndị ọkachamara football mgbe e boro ya ebubo rekwu okwu megide Patrice Evra. O nwekwara di ohuru nke ya na ya bi obi uto.
Banyere nna Suarez: Nna Luis Suarez bụ Rodolfo Suarez. Rodolfo bụ onye bụbu onye agha na onye ọgba bọọlụ gara aga maka Deportivo Artigas. N'adịghị ka akụkọ zuru ebe niile, Rodolfo ahapụghị ụmụ ya mgbe ya na nne Suarez gbara alụkwaghịm. Ọ nọrọ nso ọbụna mgbe ọ malitere mmekọrịta alụmdi na nwunye ya na onye òtù ọlụlụ ọhụrụ ya Carolina.
"Ọ dị mma mgbe niile n'etiti anyị. Anyị na-aga nnọkọ ọnụ ma nwee nnukwu oge. Enweghị obi ike n'etiti anyị. Anyị bụ ezigbo ezinụlọ. " Rodolfo kwuru na Sun.
Nna Luis Suarez bụ Rodolfo Suarez. Ebe E Si Nweta: Anyanwụ.
Banyere Suarezmụnne Suarez: Suarez nwere ụmụnna 6. Ha gụnyere Paolo, Giovana, Leticia, Luis, Maxi na Diego. Amaghi nke oma banyere umuaka zoputa maka ndi okenye Paul bụ onye na-egwu egwu ugbu a maka ịgba egwú egwuregwu AD Isidro Metapán.
Paolo bụ ọkpara nke nwanne Suarez. Ebe E Si Nweta: thefinalball.com
Ndụmọdụ Luis Suarez:
Luis Suarez nwere ihe karịrị afo iri gara aga, tolite ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-eme egwuregwu na-agbagha agbagwoju anya. Ọtụtụ ndị amaghị na ihe ọ na-eme na-agwa ya site na nwata na ịda ogbenye ịda mbà n'obi na ihe ndị siri ike na-eme n'oge ndị na-eto eto. Onye ọkpụkpọ ahụ nke na-etolite na-amụta otú e si emeri ma merie mmeri emebeghị ka ọ kpafuo site n'ije ije n'ụzọ mmeri dịka ọ na-achọsi ike ịla n'iyi.
“Mgbe m bụ nwata, ọ dịghị mgbe m na-achọ ịla n’iyi. Site na afọ asaa, Amalitere m ịme asọmpi na ihe ndị dị otú a ma ọ dịghị mgbe ọ na-amasị m ịhapụ. O kpugheere Daily Mail. N'okpuru ebe a bụ vidiyo na-adịghị ahụkebe nke jidere otu n'ime asọmpi nwata nke Suarez.
Ka afọ na-aga, Suarez ghọrọ nwata dị obi ọjọọ nke na-enwe nkụda mmụọ na ọnọdụ gbara ya gburugburu, ọkachasị ịgba alụkwaghịm nke ndị mụrụ ya, nsogbu akụ na ụba na enweghị ike ịnweta bọọlụ bọọlụ mgbe ọ chọrọ otu. N'ụzọ dị otú a ọ zụlitere mmadụ dị nwayọọ ma bụrụ onye ga-azụrịrị omume ọma ime ihe ọ maara nke ọma; na-emeri.
"Ọbụna achọrọ m imeri mgbe mụ na nwunye m Sofia na ụmụaka na-egwu egwuregwu. Enweghị m ike inyere ya aka. " O kwetara na Daily Mail.
N'agbanyeghị nke ahụ, Suarez nwere àgwà na-ezighị ezi na-egosi ya dịka ezi enyi nke ọtụtụ dịka di na nna na-ahụ n'anya. N'otu uzo ahu, o nwere akpu aru nke na agwa ya ekele maka ezinulo ya. Ihe omume ntụrụndụ ya na-agụnye igwu egwuregwu vidio ma soro ezinụlọ ya nọrọ oge.
Suarez abụghị onye na-achọ showbiz n'agbanyeghị na ọnụọgụ ego ruru $ 70 Million. N'otu aka ahụ, ụlọ ya mara mma na United Kingdom na Uruguay anaghị enweta nlebara anya site na ndị nta akụkọ nke dabere na ọrụ ya na esemokwu gbara ya gburugburu. Otú ọ dị, a na-ahụkarị ya na-anya ụdị ụgbọ ala dị iche iche gụnyere Range Rover Sports SUV, BMWs, Cadillacs na Audis.
Suarez nwere nsụgharị dị iche iche nke Audis na mkpokọta ụgbọala ya. Ebe E Si Nweta: YallaMotor.
Luis Suarez Untold Eziokwu:
Eziokwu # 1: Suárez kpooro onye na-egwu egwuregwu maka inye ya kaadi uhie mgbe ọ bụ 16 dị afọ na ndị ntorobịa Nacional.
Eziokwu # 2: A mara ya ikpe mara ndị otu egwuregwu na-emegide emegide ugboro atọ. Nke mbụ bụ mgbe ọ na-arụ ọrụ ọkachamara na Ajax mgbe ọ na-ata PSV's Otman Bakka. Ndị ọzọ so na ya bụ ndị egwu bọọlụ Chelsea, Branislav Ivanović mgbe Suarez ya na Liverpool nọ yana onye gbachitere Italy, Giorgio Chiellini n'oge 2014 FIFA World Cup na Brazil.
Eziokwu # 3: Mgbe ọ nọ na Liverpool ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ mbụ na Premier League akụkọ ihe mere eme iji merie atọ atọ megide otu ụlọ ọrụ, Norwich City.
Eziokwu # 4: A mara ya ikpe na-akparị Patrice Evra, ikpe nke Suarez na-ese okwu ruo taa.
Eziokwu # 5: Edere site na ebe nrụọrụ weebụ Spanish El Gol Digital dị ka nke ise na ndepụta nke ndị egwuregwu kacha njọ, a na-ebo Suarez ebubo na ọ na-egwu mmiri ma kweta na ọ na-ewepụ omume ọjọọ ahụ.
Eziokwu # 6: Suarez kwụsịrị afọ isii Cristiano Ronaldo na Lionel Messi site na mmeri La Liga's Pichichi Trophy na 2016.
Daalụ maka ịgụ isiokwu a na Luis Suarez bụ nwata na akụkọ ndụ. Anyị gbalịsiri ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ ebe anyị debere mpempe akwụkwọ a Akụkọ nwata na Eziokwu banyere akụkọ ndụ maka onye Uruguayan n’iru.
Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a na Suarez, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!